Ammaanka Kenya Oo La Adkeeyey iyo Cabsi Laga Qabo Weeraro Alshabaab Ka Fuliyaan.
Waxaa aad loo adkeeyay ammaanka gudaha dalka Kenya kadib markii Booliska ay sheegeen iney suurtagal tahay in dagaalyahano ka tirsan Shabaab ay weeraro ka geystaan degaanada Gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan magaalada Mandhera oo dhowr jeer ay weerareen, sida ay sheegeen Booliska Kenya.
Saraakiil Ciidamada ammaanka Kenya ka tirsan oo diiday in magacooda la shaaciyo ayaa Wargeyska Daily Nation u sheegay iney jirto fariimo Laamaha ammaanka soo gaaray oo sheegaya iney Al-Shabaab qorsheynayaan weeraro dhabo gal ah oo ay ka geystaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Waqooyi bari Kenya.
Ciidamo Boolis iyo Millitari isugu jira ayaa bilaabay howlgal ka dhan Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaya dhulka keynta ah ee Kenya gaar ahaan degaanada Xuduuda Kenya iyo Soomaaliya ku dhow.
Saraakiil ka tirsan Booliska Kenya ayaa la la’yahay halka ay cirib iyo jaan dhigeen ka dib markii dagaalyahano looga shakisan yahay Al-Shabaab weerar ku qaadeen gaadiid Booliska Kenya ay saarnaayeen oo marayay degmada Mandhera ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Ururka Al-Shabaab ayaa marar badan weerar dad rayid ah iyo Ciidamo Kenya ka tirsan lagu dilay waxa ay ku qaadeen Kenya, waxaana ugu darnaa Labadii weerar ay ku qaadeen xarunta Ganacsiga Westgate Mall iyo Jaamacada Gaarisa.